Hazie site na: kere Mgbe kwukwara Site
Armati Gwa ị Low-Flow ịsa fixtures: Ụdị, Abamuru na Akwụ ụgwọ
Ihe Site Liu shing
Low-eruba fixtures e chọrọ site The National Energy Policy Act. Low-eruba fixtures nwere ike inye homeowner na ịrịba ego na-a adigide ezu gị remodeling ma ọ bụ owuwu. Low eruba fixtures dị ka ụlọ mposi, foset aerators, na ịsa isi, nwere ike nye otu mmekọ mgbe tụnyere ndị na-abụghị ala-eruba fixtures.
Low eruba eletrik emepụta ịdị iche iche na ha technology mee, Ma ha nwere ike inye na otu results, na ọhụrụ usoro a na-mepụtara na-eji na ala eruba fixtures.
Low Flow ịsa ndi isi
Low eruba ịsa isi bụ ndị na a eruba ọnụego nke erughị 2.5 GPM na a mmiri mgbali nke 80 pound kwa square inch (psi). Otú ọ dị, na-adịbeghị anya ala eruba ịsa isi pụrụ ọbụna inye a eruba ọnụego nke erughị 2.0 GPM. The abụọ bụ isi ụdị nke ala eruba ịsa isi bụ:
Laminar-eruba - Laminar-eruba ịsa isi ga-etolite ka iyi nke mmiri na ga-enye na ihe ezi okpomọkụ akara.
Aerating - Nke a na ụdị ala eruba ịsa isi ga mix mmiri na ikuku na-akpụ a ijuputa n'igirigi ụdị mmiri ịgba. Nke a ga-ike a oké ego nke uzuoku na mmiri mmiri, ma na iru mmiri climates na-atụ aro.
Low eruba ịsa isi ga-eji dochie ndị agadi na e mere na a eruba ọnụego nke 5.5 GPM.
Low Flow ụlọ mposi
Low eruba ụlọ mposi na àjà ihe ọṅụṅụ-ala eruba mposi e mere iji ọkara ego nke mmiri nke omenala ụlọ mposi. Low eruba ụlọ mposi na-nkezi 1.6 GPF, kama 3.5 GPF.
Ihe a haziri nke ala-na-eruba mposi kemgbe n'okpuru ọkụ n'ihi na na-ekwu na ụfọdụ ụdị ike iwepụ mposi ke oru oma ụzọ. Mgbe e mesịrị usoro na ụlọ mposi arụmọrụ e kwalite ka enyemaka ndị a nsogbu, na ha na-e, ihe ka ọtụtụ, na a ọkara iwepụ nhọrọ maka mmiri mmiri n'efu na a full iwepụ maka siri ike mkpofu.
Ọtụtụ ala eruba ụlọ mposi na-na-e belata clog nsogbu n'ihi na ha drainage Itie bụ wider.
Gravity-nri Low Flow ụlọ mposi - Nke a na ụdị ala eruba mposi eji omenala arọ nke mmiri na-asọ ya ala nnukwu efere. Ha na-dị ọnụ ala karịa ma na-erughị oké ụzụ na mgbali-aka ala eruba ụlọ mposi.
Pressure-aka Low Flow ụlọ mposi - Nke a na ụdị ala eruba mposi bụ na-emekarị noisier ma ike belata mmiri oriri site 45% mgbe tụnyere ike ndọda-nri ụlọ mposi. Nke a usoro na-eji ikuku wuru n'ime tank inupụ mmiri ala.
Gịnị Banyere pọmpụ?
Old sink faucets nwekwara ike imefusị a ọtụtụ mmiri na ego. I kwesịrị ịtụle dochie gị faucets ma ọ bụrụ na ọ na-eji ihe karịrị 2.5GPM. E nwere di na nwunye nke na echiche na ị nwere ike họrọ si dochie na nke ochie faucer. Ị nwere ike ịhọrọ ma dochie ya a ọhụrụ foset, ejikari na-erughị 1.5GPM ma ọ bụ site na wụnye ihe aerator. The aerator ma ọ bụ eruba restrictir ike-atụkwasịkwara ọ fọrọ nke nta ọ bụla foset, na-enye ihe dị mfe ma dị ọnụ ala mgbanwe nke ga-azọpụta gị ego ụfọdụ ihe karịrị afọ.
Cost Uru Iji Low Flow fixtures
Low-eruba fixtures nwere ike na-achọ ụfọdụ ndị ọzọ n'ihu na-eri na-enwetara mgbe tụnyere omenala fixtures.
Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ codes achọ ka nwere ala eruba fixtures, anyị nyochaa otú ihe na-eri ihe ndị a ga ụdị fixtures nwere ike itinye gị na-ewu amaghị. Dabere na emeputa, a isi ụlọ mposi nwere ike na-eri n'etiti $ 75 na $ 450, naanị eletrik. A ala eruba mposi nwere ike mfe na-eri ihe $ 100 ọzọ dabere na emeputa, ma payback maka na ahịa nwere ike ịbụ dị ka ngwa ngwa dị ka afọ atọ ruru ka ego na mmiri ojiji.
Low-Flow fixtures Uru
Ezigbo maka Retrofitting
Low-eruba mposi nwere ike ịzọpụta karịa 20,000 lita mmiri kwa afọ maka a anọ na-otu ezinụlọ
Dị na a ọtụtụ nke na agba na ekwekọghị.
Usoro International Association of Plumbing na Mechanical Officials (IAPMO)
Ga-ezute kwesịrị ekwesị American National Standards Institute (ANSI)
Mmiri na-oru oma mposi zọpụta ego na gị kwa ọnwa mmiri ụgwọ.
Armati agwa gị otú ịrụzi Common Water foset Nsogbu
Taa mmiri pọmpụ na-ọzọ ọkaibe, na ọrụ nke wụnye ma ọ bụ nsogbu ndị a faucets aghọwo ihe siri ike. The usoro iji wụnye a foset dịtụ otu usoro ma taa technology na-eweta dị iche iche mmiri na ị chọrọ ịbụ maara nke.
Common foset Issues
Ozugbo ọ na-e ejikọrọ, ụfọdụ mbipụta nwere ike isi metụta arụmọrụ nke gị foset, dị ka leaks, squeaks na nsogbu ndị ọzọ.
Ka ayi gabiga ihe ụfọdụ na-mbipụta na isi dozie ha.
Nọmalị, ala mmiri nsogbu a foset na-kpatara ya sprayer diverter. The diverter valvụ bụ a obere ibe odude n'ime ndị foset ahu. The diverter nachi mmiri aga n'ime foset, otú ị ga-elele na ọ dị ọcha-ya nwere ike na-clogged na obere mpekere na mineral. Ọ bụrụ na ndị diverter na-adịghị clogged, i nwere ike iji dochie diverter.
Ebe ọzọ na i nwere ike ịbụ a mere mpu na ala mmiri mgbali bụ aerator. The aerator ka diverter nwere ike kpochara na a ahịhịa na ihicha ihe ngwọta. I nwekwara ike na-agbalị iji mmanya na-ewepụ ihe na unclog ya.
N'ikpeazụ, jide n'aka na nsogbu abụghị na mmiri mgbali nēsi mmekọ na-elele na mmiri valves na-tụgharịa na ụzọ niile.
Ịgba Misting si foset
Ọ bụrụ na mmiri sprays a alụlụ anya site na isi eruba mgbe ị na-eji foset, ị pụrụ iji lelee na aerator na-screwed na tightly.
Jiri a ákwà ma ọ bụ a ahịhịa wepụ minerals, teepu ma ọ bụ irighiri ihe si aerator, dị ka ọ nwere ike na-clogged. Jide n'aka na-na-elele aerator washer.
Reinstall aerator na-elele ọzọ. Ọ bụrụ na nsogbu ka na-egosi elu ị ga-mkpa-eji dochie aerator dị ka ọ nwere ike na-gbawara ma ọ bụ mebiri emebi.
Foset emefu ntapu
Mgbe ị na-achọpụta na mmiri foset ntapu, na-agbalị tightening na mbukota nut na ahụ, dị ka nke a nwere ike ịbụ ihe bụ isi na-akpata ihihi.
Mgbe ụfọdụ, a mebiri emebi O-mgbanaka kwesịrị ka a dochie anya.
Iji dochie O-mgbanaka, mechie anya mmiri akara, ebukọtala na foset na-eji dochie katrij ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dabere na nsogbu na ị na-eche ihu. Mgbe dochie o-yiri mgbaaka, hichaa n'ime spout na mpụga nke valvụ ahu. Anyị na-akwado n'ígwè ndị spout o-yiri mgbaaka na silicone dabeere griiz.
Drips si Spout
Ọzọ nkịtị nsogbu bụ drips si foset spout. Ọ bụrụ na ị na-wụnye a mkpakọ style foset, ị ga-mkpa-eji dochie oche washer na / ma ọ bụ dochie valvụ oche.
N'ihi na ihe niile ndị ọzọ mmiri pọmpụ, ị ga na mkpa iji dochie valvụ oche.
Mgbe ị na-anụ a mkpọtụ mgbe ị gbanyụọ mmiri foset, ọ pụrụ ịbụ mmiri hama. Nke a nwere ike na-edozi site wụnye ntụ ụlọ.
Ọ bụrụ na ị na-ama arụnyere ikuku ulo nile, gbanyụọ mmiri, igbapu mmiri akara na ka mmiri azụ ọzọ. Mgbe mkpọtụ emee mgbe mmiri foset agbanyere, valvụ pụrụ ịchọ a ọhụrụ washer, ma ọ bụ na mmiri nrụgide si ọkọnọ akara bụ ma kwa elu ma ọ bụ ala nke ukwuu.
Foset emefu siri ike Arụ Ọrụ
Nọmalị a siri ike na-arụ ọrụ ahụ nwere ike ime n'ihi na sediments ma ọ bụ irighiri ihe mebiri emebi katrij.
Irighiri, metal iberibe na mineral nwere ike imebi akara n'ime katrij.
Ị nwekwara ike iji dochie katrij ma ọ bụ iho mmanu ya na silicone dabeere griiz. Unu na-eji plomba si ọkwa foset griiz, sịlịkọn sprays ma ọ bụ ọ bụla mmanu na ike ịnwe mmanụ ala. Petroleum dabeere lubricants pụrụ imeghachi omume na roba akàrà na nwere ike ime ka ahụ na-ọbụna karị siri ike iji rụọ ọrụ.
Armati akụzi ị Eduzi on Olee otú Họrọ na Right Plumbing Pipe
E nwere ọtụtụ ụdị nke Plumbing ọkpọkọ maka residential ma ọ bụ azụmahịa ụlọ. Plumbing ọkpọkọ dị ka PEX, Ọla kọpa na ịkwanyere na-eji na-ejikarị dabere na ha na ngwa ma na ọnọdụ na nke ha na-arụnyere. Na mgbakwunye, e nwere ụfọdụ ndị ọzọ Plumbing anwụrụ ụdị ndị dị otú ahụ dị ka nwa, galvanized na ọla. Ka anyị hụ n'okpuru ndị kasị mma ngwa n'ihi na ihe ndị kasị eji Plumbing ọkpọkọ.
Igwe anaghị agba nchara Ọkpọkọ
Igwe anaghị agba nchara ọjà. Photo Hans Pixabay
Igwe anaghị agba nchara nwere ike anya nnọọ mma n'anya ma ọ bụ dị nnọọ expensive.Stainless ígwè anwụrụ na-eji ebe n'okpuru corrosion na nso ala gbara osimiri okirikiri ebe. Nke a na ụdị nke anwụrụ dị na ma mgbanwe, na isiike na ga mkpa ụfọdụ pụrụ iche couplings na-mmasị ndị ọzọ ụdị ọkpọkọ. Ekwela emegharị anaghị agba nchara ọkpọkọ na galvanized ọkpọkọ. Na ọ bụ dị iche iche nha na ogologo.
Pex piping bụ a mgbanwe plastic piping na aghọwo a na-ewu ewu nhọrọ na residential na obere azụmahịa ngwa. Ọ bụ ezie na ubé elu mbụ na-eri, ya di ntakiri mmezi ma na ngwa ngwa nwụnye usoro-eme ka ọ na-kacha mma anwụrụ maka mmiri nkesa n'ime a ụlọ. PEX piping enye a n'ezie ehi ehi-free ngwaahịa àjà uru n'elu ọla kọpa piping. Otu n'ime ndị kasị mkpa ndọghachi azụ bụ na ọ na ike ga-eji na n'èzí ngwa n'ihi na UV ụzarị nwere ike imebi bụ n'èzí plastic oyi akwa.Ọzọ
Ọla kọpa piping Ji Plumbing
Clean ọla kọpa mgbe ọ e ebipụ. Photo Cedarcityrecycling.com
Ọla kọpa ọkpọkọ na-eleghị anya ndị kasị omenala Plumbing anwụrụ mee ruru ha ọtụtụ oge na pụrụ ịdabere. Ha na-enye elu corrosion eguzogide, oké ihe onwunwe ga-eji na-ekpo ọkụ na mmiri oyi, na ya nwere ike jisiri mfe. Otú ọ dị, ihe ndị kasị mkpa a ga-atụle n'ihu iji ọla kọpa piping bụ na ọ dị mkpa ka a soldered ọnụ na ya nwere ike na-achọ ndị ọzọ oyiyi akwa. Bụghị onye ọ bụla bụ ihe ọma na soldering ọla kọpa ọjà, ma isiokwu Olee otú Solder Ọla kọpa Ọkpọkọ nwere ike inyere gị aka.
Ịkwanyere anwụrụ. Photo publicworksgroup Flickr
Ịkwanyere Plumbing ọkpọkọ na-eji oyi na-ekpo ọkụ potable mmiri nakwa na nsị ngwa. Ịkwanyere ọkpọkọ ịdị iche iche na ha ọkpụrụkpụ na nhazi dabere na ngwa ebe ọ ga-eji. Ka ihe atụ, nsogbu mmiri ọjà, abụghị otu dị ka siwa ọjà, abụghị otu dị ka ndị ji na oké mmiri ozuzo na drainage usoro. Plastic Plumbing ngwaahịa mere maka potable mmiri ngwa na-na-ẹkedọhọde na-ma "NSF-PW" ma ọ bụ "NSF-61" na-egosi na ngwaahịa complies na ahụ ike mmetụta chọrọ nke NSF / ANSI Standard 6.
Kpaliri Plumbing Ọkpọkọ
Galvanized ọjà. Photo Home ebusa
Kpaliri piping e ji ọtụtụ afọ gara aga dị ka ọkọlọtọ maka residential oru ngo. Otú ọ dị, na oge ọ na-eji ugboro ugboro n'ihi na nchara na-adịghị ike na-ewuli elu n'ime obere dayameta ọkpọkọ. Ọ bụrụ na ọjà torola, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ na mmiri na-abịa site foset na nchara na-adịghị metụtara dị ka ọnụ ọgụgụ nwere ike imebi omume rụrụ site n'ime ọjà. Galvanized ọkpọkọ nwere ike ji mee ka ibufe isi awọ mmiri ma ọ bụ ndị na-abụghị potable mmiri.
Brass Ọkpọkọ Ji Plumbing
Brass Plumbing ọkpọkọ enye oké nchara na-eguzogide piping, ma ọ bụrụ na ọ mere nke 67% na 85% ọla kọpa. The kacha mma ọla anwụrụ ọkwa a nwetara mgbe alloy nwere 85% ọla kọpa na-akpọ red ọla ọjà. Brass piping enye a na-anọ ogologo oge ihe onwunwe nke na-adịghị ajari n'ime ime na ọ na-adịghị na-akpata esemokwu weere n'ime ọjà. Brass Plumbing ọkpọkọ-adị mfe eri karịa ígwè ọkpọkọ na magburu onwe ya n'ihi na-ekpo ọkụ-mmiri na nnukwu na usoro, dị ka mgbapụta oyiyi akwa, mmiri tankị, na akọwa. Brass anwụrụ ejikari agbasaghị adịru ogologo oge karịa ihe ọ bụla ọzọ Plumbing ihe onwunwe. Brass anwụrụ n'ozuzu abịa na 12-ụkwụ ogologo ogologo.
Igba Iron piping
Nkedo ígwè ọjà. Photo McWane, Inc.
Nkedo ígwè Plumbing ọkpọkọ na-ejikari arụpụtara dị ka mgbịrịgba-and-spigot ụdị. Ọ pụrụ ịchọta nakwa na threaded nkwonkwo ma ndị ọzọ dị oké ọnụ karịa mgbịrịgba na spigot otu. Ndị a ọkpọkọ bụ arọ karịa ihe ọ bụla ọzọ ọjà, ejikari maka mmiri nkesa usoro, ma ọ bụ n'okpuru ala echichi dị ka isi anwụrụ na drainage ma ọ bụ siwa usoro. The kasị nta size na-ejikarị bụ manufactures bụ 4 "ọjà, nnukwu iji ga-eji na residential ngwa. Nkedo ígwè anwụrụ arọ na a ga-akwado ka ị na-ezukọta a nkwonkwo.
Armati Gwa gị ụlọ mposi: mposi Ịzụchapụta Guide Atụmatụ
Ụlọ mposi ndị dị mkpa n'ezie na ngwa na-eji mgbe niile na otu n'ime ndị kasị eleghara anya iberibe a ime ụlọ ịwụ. Ndị mmadụ ga-elekwasị anya ọzọ na a okpokoro ịwụ ma ọ bụ ihe efu kama ilekwasị anya na ụlọ mposi. E nwere ọtụtụ ụdị nke ụlọ mposi, dị ka omenala, ala ozo, azụ mgbidi, mgbidi eyịride, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ma, ọ dị mkpa n'ezie ka mara na ọ bụghị ihe niile na-ụlọ mposi bụ ọkọlọtọ ụlọ mposi. N'ihi ya na-n'aka-elele anyị mposi azụ ndu.
Mposi Ịzụchapụta Guide
Nke a mposi azụ ndu ga-nyere gị aka tupu ị zụrụ gị ọzọ mposi. Otú ijide n'aka na:
Kpebie ma ọ bụrụ na ị ga-eji a otu otu ma ọ bụ abụọ mpempe mposi
Họrọ mposi ga-na nnabata na obodo ụkpụrụ
Họrọ ụdị nke echichi
Tụọ dị ohere ebe mposi ga-arụnyere
Mgbe o kwere mee, na-agbalị izu a mposi si a ewere aha
Ikpebi n'etiti a okirikiri ma ọ bụ elongated mposi nnukwu efere
Na mgbakwunye na-azụ ahịa na ndu, na-atụle ndị a dị mkpa ụlọ mposi atụmatụ
Water Saving- Ụfọdụ ụlọ mposi nwere ike a mmiri uche asambodo, elu-arụmọrụ mposi flushing na 1.28 lita ma ọ bụ obere kwa iwepụ, dị ka e jiri ya tụnyere 1.6 lita nke ot ụlọ mposi.
Dual Flush- Ị chọrọ họrọ a mposi na nwere ike inye gị na ikike a ele mmadụ anya n'ihu iwepụ maka mmiri ma ọ bụ a zuru iwepụ maka siri ike n'efu?
Mposi Bowl Height- Comfort ụlọ mposi na-ewere dị ka ndị na-abụghị omenala ụlọ mposi. A ọkọlọtọ nnukwu efere rim emi odude 15 sentimita n'elu n'ala, ma ụlọ mposi ọkwa na 17 sentimita na-atụle ndị kasị mma. A 17 inch na ọbụna a 19 inch mposi nnukwu efere elu ga-na nnabata na ndị America na Disabilities Act.
Bowl shape- An elongated nnukwu efere, ọ bụ ezie na enyene ọzọ ohere, na-enye ihe-aba ohere na-enye ohere ole na ole odors agbanahụ. Were a echiche dị ka ihe elongated nnukwu efere nwere ike ruo 6 "ogologo oge karịa a ọkọlọtọ nnukwu efere.
Otu Ibe Toilet- abụọ mpempe ụlọ mposi dị ọnụ ala karịa otu ụzọ nke ma ha na-akwakọba ájá n'etiti tank na nnukwu efere. One-mpempe mposi bụ ihe dị oké ọnụ na pụrụ ịbụ ike iji wụnye karịa a abụọ-ibe mposi. Ma arụmọrụ ha fọrọ nke nta ahụ.
Iwepụ Systems- Rubber flappers bụ ihe nke gara aga. Lee maka ọhụrụ iwepụ elu na-pụrụ ịdabere ochie flappers. Pressure-aka mposi ndị ọzọ mmiri-oru oma flushers karịa ike ndọda ụlọ mposi.
Valve- Gaa mgbe ụlọ mposi na dịkarịa ala a 3 inch iwepụ valvụ. Traditional mposi nwere a 2 inch valvụ napụtara obere nzube karịa ndị ọhụrụ.
Ike ike-in Dimensions- Anya site azụ mgbidi na mmiri akara n'ọnụ ụzọ dịgasị iche n'ebe nlereanya na ihe nlereanya, ya mere, na-ajụ tupu inwe ọhụrụ gị mposi.
Noise- Noise nwere ike ịbụ a na-akpata mgbe gị mposi na-aga na-arụnyere nso elu n'ụzọ ebe.
Color- More karịa 80 percent laa mgbe omenala ọcha, ọ bụ ezie na ndị ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ na onye ọ bụla ụbọchị na-agbalị ọhụrụ osisi na agba.
Water Lines- Iji mgbanwe anaghị agba nchara mmiri edoghi kama ọ bụ isiike chrome-kpasiri ọla kọpa e.
Mechie-Off Valve- E nwere ọtụtụ ụdị nke na njikọ maka a mechie-apụ valvụ. Solder njikọ na a mkpakọ njikọ bụ kasị eji, ma jide n'aka na ị na-adịghị ochie ígwè ọkpọkọ dị ka ha nwere ike na-achọ ụdị ụfọdụ nke dị iche iche njikọ.
Ndị a bụ n'elu ụlọ mposi emepụta na i nwere ike ịhụ na US. Ọ ga-nile na-adabere na gara aga ihe na ego ole ndị ahịa na-adị njikere ịkwụ ụgwọ.
Toto-Toto bụ otu n'ime nnukwu 3 nke ụlọ mposi na-emepụta
Kohler- Kohler awade nnọọ mma na ngwaahịa na ezi uche ahịa.
American Standard-N'ihi ọcha price, na American Standard mposi bụ a kwesịrị osompi.
Armati akụzi ị towel Bar Nwụnye Elu na ndị ọzọ Bath Ngwa
Towel Ring na ndị ọzọ naa Ngwa Nwụnye Heights
Ụlọ ịwụ ngwa kwesịrị otu nke ọhụrụ ihe na-arụnyere mgbe n'ịrụgharị ma ọ bụ n'oge na-ewu usoro. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-amaghị otú na ebe iji wụnye ụlọ ịwụ ngwa, mgbe ahụ, i nwere ike na-agba ọsọ n'ime ibu nsogbu ka ị nwere ike na-egwu ala n'elu taịl eme emebi site na-enweghị isi-egwu. Lee ụfọdụ na-atụ aro-elu na i nwere ike iji mgbe wụnye ụlọ ịwụ ngwa.
Cheta mgbe niile okpukpu abụọ elele na mpaghara gị ụlọ codes na Ada ụkpụrụ nduzi.
Ọtụtụ n'ime ndị a na-atụ aro elu-e si International Residential Code (IRC), chọrọ nke America na Disabilities Act na bipụtara National Kitchen & Bath Association.
Standard Mirror Nwụnye Elu
Enyo nwere ike arụnyere na a dị iche iche elu na-adabere n'ụdị nke mirror na-arụnyere. Dị ka a n'ozuzu guideline, ha nwere ike na-arụnyere n'etiti 38 na 42 sentimita asatọ. Nke a n'ihe metụtara ala elu nke mirror, tùa site n'isi n'ala. My nkwanye bụ na mirror ga-n'ịnyịnya na ala onu nke na-atụgharị uche n'elu bụla dị elu karịa 40 sentimita n'elu n'isi n'ala. Mgbe ụfọdụ ị ga-achọ na etiti mirror na mgbidi na ihe efu n'ihi na aesthetic na nzube. Ọ na-atụ aro ka ịwụnye a otu na-ogologo mirror ọ bụla washroom mgbe saa a ga-eji site na ọha na eze.
Nwụnye Elu maka naa shelves
Shelves na-arụnyere na dị iche iche elevations dabere na ojiji na ụdị shelf na-arụnyere. Nọmalị mgbe nwere ike arụnyere n'etiti 3 ụkwụ na 4 ụkwụ kwa, dị ka mirrors.However, a ga-iche dabere na ụdị nke ime ụlọ ịwụ na e nwere ihe ọhụrụ na-emekarị ka nwere niches kama shelves.
Ụlọ ịwụ Ngwa nrụnye: Ncha efere / Ncha Dispenser
The ncha efere ga-arụnyere na ihe ndika elu nke 44 sentimita asatọ ma ọ dị elu dị ka 54 sentimita asatọ. The ncha efere elu ebe a ga-emi odude si ịsa ịgba. Mgbe ncha dispenser ga-arụnyere na a kacha nta 40 sentimita asatọ na dị elu dị ka 48 sentimita asatọ. Kwesịrị ncha efere ga-arụnyere na 48 sentimita asatọ; Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ bụ a ncha dispenser, ha push mkpọchi ga-emi odude 44 "kacha n'elu FF.
Towel Ring Nwụnye Elu
The towel mgbanaka ga-arụnyere n'etiti 50 sentimita asatọ na 52 sentimita n'ịdị elu, tùa site n'isi n'ala. Ọ bụrụ na ị na-atụ ya na-efu mgbe ahụ bụ ga-eyịride 20-22 sentimita n'elu ya. N'ozuzu, ndị zuru kacha nta dị elu bụ 36 "maka akwa nhicha, 18" maka asacha ákwà tụrụ si efu countertop.
The towel okporo ígwè elu nwụnye ga ịdị iche dabere na ụdị na ojiji nke na-asa ahụ. The okporo ígwè ga-arụnyere n'otu elu mgbe na-asa ahụ ga-eji ụmụ. A towel okporo ígwè ga-arụnyere 48 sentimita n'elu n'ala. Ị chọrọ iji lelee nwekwara ọnọdụ nke eletriki na ji achọ tile ọrụ. Mgbe wụnye multiple towel rails, tụọ otu nke ga-kasị elu, na mgbe n'ogige atụrụ a towel na na larịị.
Mark 2 sentimita n'okpuru ebe ebe towel na ala na na kwesịrị ịbụ ebe a na-wụnye abụọ okporo ígwè.
Akwụkwọ mposi Roll njide Elu?
The akwụkwọ mposi mpịakọta njide nwere ike arụnyere n'etiti 19 na 26 sentimita si n'ala. The America na Disabilities Act obi iji 19 sentimita mgbe National Kitchen & Bath Association na-atụ aro 26 sentimita dị ka na ezigbo elu. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a otutu ohere, ị pụrụ iji tụlee attaching ya n'akụkụ nke efu.
Ụlọ ịwụ Ngwa nrụnye: Cabinet
Ụlọ ịwụ cabinets na-ejikari arụnyere na 54 sentimita n'elu okokụre n'ala. Nke ahụ bụ n'ihi na ị ga-na-emekarị nwere a 36 sentimita ọkọlọtọ efu plus 18 sentimita asatọ nke ohere dị n'etiti. Mgbe ụfọdụ, a Nchikota mirror / kabinet a họọrọ otú ijide n'aka na ọ arụnyere na 12 sentimita n'elu nke countertop.
Ụlọ ịwụ Ngwa nrụnye: Jidere Ogwe
Jidere Ogwe ga-enịm dịkarịa ala 33 "-36" n'elu n'ala. Mgbe nwụnye dị n'akụkụ mgbidi ijido mmanya ga-42 sentimita asatọ ogologo kacha nta, emi odude 12 sentimita kacha sikwa n'azụ mgbidi na inyịme 54 sentimita sikwa n'azụ na wall.There bụ na ozi ndị ọzọ na otú nwụnye ijido mmanya, dị ka na-atụ aro site na America na Disabilities Act anyị isiokwu banyere jidere Ogwe.
Nwụnye Elu maka Hand Dryers
Hand dryers nwere ụfọdụ ndị ọzọ kpọmkwem ụkpụrụ nduzi, ka ha ga-enwe ike ike ejikwara mfe itinye na kacha nta force.These nkeji ga-ezute kpọmkwem Ada akụkụ-akwanyere otú ihe ha nwere ike protrude na kwesịrị si a iche na agba. The push button ga-arụnyere na 38 sentimita n'elu FF na ọ dịkarịa ala a doo anya n'ala ohere nke 30 "x 48" n'ihu them.When karịa otu aka draya arụnyere, nke abụọ unit nwere ike arụnyere n'etiti 42 "-48" n'elu okokụre n'ala.
Armati-akụziri gị otú Refinish a okpokoro ịwụ
Melite gị ụlọ ịwụ site-enye ume ọhụrụ na agba na okpokoro ịwụ.
Ka Nature na Na N'èzí ịsa
N'èzí mmiri bụ bụghị naanị n'ihi na poolside na ọha osimiri ọzọ. Ha na-ngwa-ngwa-aghọ a-enye ume ọhụrụ mgbakwunye na-adị kwa ụbọchị n'ụlọ ụlọ ịwụ.
Armati akụzi ị The Anatomy of a okpokoro ịwụ na Olee otú Wụnye a Nnọchi
Mata ihe nile banyere bathtubs gụnyere otú wepụ na-eji dochie onye.
Armati-akụziri gị otú Wụnye ihe Anti-skald valvụ
Kwụsị mberede ịsa mmiri okpomọkụ mgbanwe site na wụnye ihe mgbochi-skald valvụ gị ịwụ.
Armati akụzi ị Olee otú Wụnye a Nkuku ịsa
Nke a na kọmpat ma nkecha ịsa kit nwere onwe elu ohere na a obere bath.
AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS AF SQ AM AR HY AZ EU BE BN BS CA CEB NY zh-CN zh-TW CO HR CS DA NL EO ET TL FI FR FY GL KA DE EL GU HT HA Haw IW HI HMN HU IS IG ID GA IT JA JW KN KK KM KO KU KY LO LA LV LT LB MK MG MS ML MT MI MR MN MY NE NO PS FA PL PT PA RO RU SM GD SR ST SN SD SI SK SL SO ES SU SW SV TG TA TE TH TR UK UR UZ VI CY XH YI ZU elu ọgwụgwụ ụlọ ịwụ foset ụlọ ịwụ foset emeputa ịsa foset emeputa ụlọ ịwụ ngwaike emeputa elu mma ụlọ ịwụ ngwa hotel ụlọ ịwụ facuet okomoko bath nfiksi aru ugboelu usoro mmetụta foset emeputa china zoro ezo ịsa emeputa china ịsa usoro factory china bath ngwa soplaya mgbidi n'ịnyịnya tap soplaya